Edebere Uzo Igwe PVC Igwe eji eme ihe n’ala a ka emebere ya maka ulo oru ikike igba ogbara ohuru na nke ndi ọha. Enwere ike belata ụgwọ ọrụ ọrụ na oge nrụnye n'ihi nkwado a kpokọtara.
Green Green House Ulo Mount sistemu (usoro ihe eji edozi mbara ala) na-eji ala ndi oru ugbo zuru oke ma na-enweta ike dị ọcha site n’anyanwụ, na-ewetara ụmụ mmadụ ọdịnihu dị ọcha.
Enwere ike iji ụgbọ mmiri mkpuchi ụgbọ mmiri na-egbochi mmiri nke PV Solar dị ka ebe a na-akwụ ụgwọ ozugbo maka ụgbọ eletrik ozugbo ejikọtara ya na kabetị chaja.
E jiri ya tụnyere carport ọdịnala, structuredị nke dị n'ime ụlọ kachasị mma na ihe mkpuchi mmiri nke FOEN na-eme ka o kwe omume na-eduga, na-anakọta ma na-egosipụta mmiri ozuzo na usoro mkpuchi mmiri, na-erute mgbochi mmiri ma na-echebe carport n'ime nke ọma. Na mgbakwunye, nkwonkwo na-adịghị abanye mmiri nwere ike ibu ma kesaa ya ugboro ugboro, yabụ na-ebelata ibu ọrụ na saịtị.
FOEN Ground Screw bụ ụdị ntọala ọhụrụ maka usoro idobere ala. Itinyela akwụkwọ n'ọrụ ahụ n'ọrụ maka iwulite ọrụ ala anyanwụ. N'ihi atụmatụ ya pụrụ iche na nke na-adịgide adịgide, FOEN Ground Screws na-eme ka ndị ahịa nwee nrụnye dị mfe & Ọsọ karịa na arụmọrụ dị elu.
Usoro owuwu nke Aluminom nke FOEN, na-enye Allarum Solar Frame, nke di elu, ị nwere ike ime omenala ebe a. Ntụkwasị obi ịdị mma!